Ukubonisana nezimpendulo - Isisekelo Semivuzo
Ikhaya Ukubonisana nezimpendulo
I-Reward Foundation isiza ukuqwashisa ngentuthuko ebalulekile yocwaningo kwezocansi nobudlelwano bothando kanye nezinkinga ezilethwe izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi. Lokhu sikwenza ngokunikela kuhulumeni nasezimbonini. Leli khasi livuselelwa nezindaba zokuthunyelwa esikwenzile ezinqubweni zokubonisana zikahulumeni.
Uma ufunda nganoma yikuphi okunye ukubonisana okungahle kutholakale i-The Reward Foundation, sicela usishiye imeyili.
Nayi eminye iminikelo yethu…
I-8 December 2020. UDarryl Mead uphendule ekubonisaneni noHulumeni waseScotland obiziwe Kuphephe Ngokulinganayo: Ukubonisana ngenselelo yokufuna kwabesilisa ubufebe, ukusebenzela ukwehlisa izingozi ezihambisana nobufebe nokusiza abesifazane ukuphuma. Noma impendulo isekele ukwamukelwa kweModeli yeNordic eScotland, njengoba kukhuthazwa ngu Imodeli yeNordic Manje!
22 Julayi 2019. I-TRF ibe nomthelela kwinqubo yokubumba ukuthola imibuzo ezosetshenziswa kwinhlolovo ye-NATSAL-4. Ucwaningo lukazwelonke lweZimo Zengqondo Zobulili kanye nendlela Yokuphila belusebenza e-UK kusukela nge1990. Ngenye yezinhlolovo ezinkulu zohlobo lwayo emhlabeni.
28 January 2019. UMary Sharpe unikeze impendulo egcwele ophenyweni lweKomidi Elikhethiwe Lokhetho mayelana nokukhula kwe-Immersive and Addictive Technologies. Uphenyo lwenziwe eMnyangweni Wezedijithali, Amasiko, Abezindaba Nezemidlalo. Kufanele ishicilelwe yiPhalamende lase-UK kungekudala.
16 Julayi 2018. EScotland uMkhandlu Kazwelonke Wokweluleka Kwabesifazane Namantombazane ungungqongqoshe wokuqala usuqale uhlelo oluqhubekayo lokumema izimpendulo zokubonisana ezindabeni zabesifazane. Ukunikela kwethu kokuqala bekukuzixhumanisi phakathi kokuhlukunyezwa ngokocansi nokusetshenziswa kwezithombe zocansi.
I-6 December 2017. I-TRF iphendule i-UK's Internet Safety Strategy Green Paper Consultation. Siphinde sahambisa incwadi kwiThimba Lecebo Le-Internet Safety eMnyangweni Wezedijithali, Amasiko, Abezindaba Nezemidlalo mayelana nezichibiyelo eziphakanyisiwe zoMthetho Wezomnotho Wedijithali. Isikhundla sethu ukuthi uHulumeni wase-UK kumele abambelele ekuzibophezeleni kwakhe ekwenzeni izinto ezingekho emthethweni ezingekho emthethweni futhi ezingekho emthethweni online. Izindawo ezibalulekile zisusa ukufinyelela ezithombeni zocansi ezinodlame nezithombe ezingezona ezezithombe zezingane ezihlukumeza ngokocansi.
11 Juni 2017. UMary Sharpe uthumele impendulo yokubonisana eSuweni laseScotland lokuvimbela nokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazane namantombazane. Impendulo yethu ishicilelwe nguHulumeni waseScotland ku- iwebhusayithi.
April 2017. I-Reward Foundation ihlelwe njengensiza enesixhumanisi ekhasini lethu lasekhaya I-National Action Plan ku-Intanethi Ukuphepha Kwezingane Nezinsizwa eshicilelwe nguHulumeni waseScotland.
8 March 2017. I-TRF yathumela ngokubhaliwe uphenyo lwePhalamende laseCanada ngemiphumela yezempilo yezithombe zocansi ezinodlame kubantu abasha. Kuyatholakala lapha ku- isiZulu futhi French. Ukuthunyelwa kwethu kukhishwe yi- Umbiko ophikisayo elungiswe amalungu e-Conservative eKomidi.
Februwari 2017. UHulumeni waseScotland umeme izimemezelo zamagama ayi-100 ngekusasa lekharikhulamu leMfundo Yomuntu kanye Nezocansi ezikoleni zaseScotland. Ukuthunyelwa kweReward Foundation kunombolo 3 lapha.
11 February 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead bahambise umcimbi wokuqeqesha kwi-internet porn kubantu abasha abayi-15 ohlelweni lwe-5Rights e-Young Scot ngomthelela wezithombe zocansi ze-intanethi kubantu abasha eScotland. Lokhu kube yingxenye yenqubo yokubonisana eholele ekushicilelweni kwe Umbiko Wokugcina WeKhomishana Ye-5Rights Youth Commission kuHulumeni waseScotland May 2017.
20 Okthoba 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead bamenyelwe eSymposium ngomhlaka 'Ukuphepha Kwezingane Ku-inthanethi: Ukugcina Phambi Komdlalo' ePortcullis House, eWestminster. Lo mcimbi ubuhlelwe i-Working Party on the Family, Lords kanye ne-Commons Family & Child Protection Group yasePhalamende lase-UK ukusiza ukwamukelwa koMthethosivivinywa Wezomnotho Wedijithali ngePhalamende lase-UK. Umbiko wethu we-Symposium uyatholakala lapha. Ngaphambili ku-2016 siphendule ekubonisaneni kwe-intanethi kuMthethosivivinywa oqhutshwa nguMnyango Wezamasiko, iMidiya kanye Nezemidlalo.
9 March 2016. I-Foundation Foundation yasabela ekubizeni ubufakazi obhaliwe obuvela e-Australian Senate ku "Kulimaza ukwenza izingane zase-Australia ngokufinyelela ezingcolile zobulili ezingcolile". Lokhu kushicilelwe ifomu elincane ngokufana nokuthunyelwa kwe-284 futhi lingabonwa ngokungena ngemvume ku- IPhalamende lase-Australia Iwebhusayithi.